Taxanaha qolka Sunshine ee ugu fiican-Soo-saare iyo Warshadda cad oo hufan | Dijing
Ku raaxayso nolosha, ku raaxayso qorraxda, oo ka dhig mid u dhow guriga iyo cirka. Guriga Sunshine waa naqshad qurxin oo si weyn loo raadinayey suuqa dhowaan. Waxay leedahay shuruudo sare oo ah dhulka bannaan iyo xaaladaha dhismaha, laakiin dhammaystirka ka dib, saameyntu way ka sarraysaa, waayo -aragnimada nololeedna si weyn ayaa loo hagaajiyaa: iyadoo neecawdu ku qubeysato qorraxda, adduunyadu waa ballaaran tahay, dhaqso iyo gaabis. . Taxanaha qolka qorraxda ayaa ku siinaya adeegyo tayo sare leh oo dawaarle ah si loo abuuro khibradda ugu dambaysa ee qoys gaar ah.
Injineernimada xirfadeed ee naqshadeynta qaab -dhismeedka walxaha aluminium, dhumucda sare si loo hubiyo tayada adag, sida qaab -dhismeedka dibedda ee guriga, si wax ku ool ah iskaga caabin weerarka duufaanta iyo cimilada kale ee xun; Naqshadda qaab -dhismeedku waa mid adag oo la jaangooyay, iyo qodobka badbaadada astaanta guud ayaa sarreeya. Muraayadda dahaarka leh ee lakabka badan leh ayaa si adag oo adag loo rakibay, maaddadu aad bay ugu fiican tahay dhammaadka sare, dahaarka kulaylka, dabaysha iyo ilaalinta roobka, si ay kuu siiso dammaanad tiknoolajiyadda amniga ah, adeegga tayadana waa mid aan fiicnayn. Buuxinta iyo xoojinta waxay qaadataa xabagta ilaalinta deegaanka oo tayo sare leh iyo agabyo kale, kuwaas oo astaan ​​u ah caafimaadka iyo badbaadada. Kuma jiraan gaasas waxyeello leh sida aalkolada methyl. Waxay leedahay iska caabin cimilada oo wanaagsan iyo iska caabinta UV, mana ku falceliso dhalada. Waxay leedahay waxqabad deggan, qurux badan oo waara. Waxa kale oo ay qaadataa xargaha dahaarka kuleylka ee xirfadda leh iyo xariijimo shaabadaysan oo loogu talagalay qolka qorraxda. Dahaarka dhawaaqa iyo badbaadinta kulaylka dhammaantood waa la gaadhay heer aad u sarreeya, oo ku siinaya khibrad nololeed oo aad u sarraysa.
1. Is -habeyn wanaagsan, bilawga maaddada. Qaab -dhismeedka aluminium ee qaro weyn wuxuu leeyahay qaab khafiif ah oo dhumucda derbiga ugu weyn waa 3.0mm. Ma aha oo kaliya inay u heellan tahay hagaajinta tayada, laakiin sidoo kale waxay tixgelineysaa muuqaalka quruxda badan. Waxay qaadataa habab daaweyn oo kala duwan. La kulan qaababka qurxinta ee kala duwan iyo baahiyaha macmiilka;
2. Qaabka astaanta guud waa mid qaro weyn wuxuuna qaatay qaab-dhismeed godad badan leh, oo ay weheliso dahaarka dhawaaqa laba-lakabka ah iyo xargaha nylon ee kulaylka, kaas oo si fiican u daciifin kara gudbinta dhawaaqa dibadda iyo xannibaadda faragelinta buuqa;
3. Qalab tayo sare leh kama baqayaan imtixaanka dabaysha iyo roobka, ma gaboobaan ama cimiladu, waxay leeyihiin biyo-xidhnaan aad u fiican, oo aad bay u kordhiyaan nolosha adeegga;
4. Muraayadda dahaarka badan leh waxay qaadataa dahaarka dhawaaqa firfircoon iyo teknolojiyadda ilaalinta kuleylka si ay gebi ahaanba u go'doomiso socodsiinta kuleylka dibedda, taas oo kaliya ma xaqiijin karto waxqabadka iftiinka sare, laakiin sidoo kale waxay ilaalin kartaa heerkulka gudaha xaalado raaxo leh.
Hore: Taxanaha Daaqada Casement
Xiga: Taxanaha Daaqada oo Furan Si Furan